कुशल व्यवस्थापनको आधार | गृहपृष्ठ
Home शिक्षा कुशल व्यवस्थापनको आधार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत व्यवस्थापन सङ्कायको पढाइ हुने कलेजहरू ४ सय ५० को हाराहारीमा छन् । त्रिविबाट गत आर्थिक वर्षमा कुल १ सय १४ नयाँ क्याम्पसले सम्बन्धन लिएकोमा ९२ क्याम्पसले व्यवस्थापन सङ्कायका लागि सम्बन्धन लिएका थिए । व्यवस्थापन सङ्कायका ९० प्रतिशत विद्यार्थी समेटेको दाबी गर्ने त्रिविको यो तथ्याङ्कले व्यवस्थापन शिक्षाप्रतिको आकर्षणलाई छर्लङ्ग पार्छ ।
पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गत करीब दुई दर्जन, काठमाडौं विश्वविद्यालयअन्तर्गत एक दर्जन र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न कलेजले व्यवस्थापन विषयको पढाइ सञ्चालन गर्दै आएका छन् । विशेषगरी त्रिविअन्तर्गत व्यवस्थापनका विविध विषयको पढाइ शुरू गर्न सम्बन्धन माग्ने कलेजहरूको ताँती पनि लामै छ ।
यही अनुपातमा पछिल्ला वर्षहरूमा स्नातक अध्ययनका लागि व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गतका विविध कोर्स रोज्ने विद्यार्थीको चाप पनि निकै ठूलो छ । विशेषगरी ब्याचलर इन बिजनेश एडमिनिष्ट्रेशन (बीबीए), ब्याचलर इन होटल म्यानेजमेण्ट (बीएचएम), ब्याचलर इन ट्राभल एण्ड टुरिजम म्यानेजमेण्ट (बीटीटीएम), ब्याचलर इन इन्फर्मेशन म्यानेजमेण्ट (बीआईएम) लगायतका कोर्सप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढेको पाइन्छ ।
हरेक व्यवसायबाट उच्चतम लाभ लिन कुशल व्यवस्थापकीय क्षमता आवश्यक हुन्छ । यसै वास्तविकतालाई बुझेर नै नयाँ पुस्ताका विद्यार्थीहरूले व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरिरहेको पाइन्छ । विद्यार्थीहरू व्यवस्थापनअन्तर्गतका वित्त, पर्यटन र सूचनाप्रणालीजस्ता विषय अध्ययन गर्न बढी आकर्षित भएको पाइएको छ । यी विषयहरू अध्ययन गर्नेहरूले पाएको सफलता पनि आकर्षणको कारण बनेको छ ।
हाल त्रिविमा मात्र ४० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले व्यवस्थापन शास्त्र अध्ययन गरिरहेको निमित्त डिन प्राडा. पुरुषोत्तम शर्माले बताए । जब कि, प्राविधिकतर्फका सबै विषय (चिकित्सा, इञ्जिनीयरिङ, कृषि तथा पशु विज्ञान, वन विज्ञान र विज्ञान तथा प्रविधि) मा गरी जम्मा २१ हजार ४ सय विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । त्यस्तै, हाल नेपालमा ८० ओटा कलेजले विदेशी विश्वविद्यालयहरूको सम्बन्धनमा व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गतका विभिन्न विषयको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको शिक्षा मन्त्रालयको एक अध्ययनले देखाएको छ । यसका अतिरिक्त नेपालबाट वार्षिक २० हजारभन्दा बढीको सङ्ख्यामा विद्यार्थी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जाने गरेको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्कले बताउँछ ।
विश्वव्यापीकरणले विश्व नै एउटै बजार हुन लागेको अहिलेको अवस्थामा विश्वविद्यालय/कलेज र विद्यार्थी तथा अभिभावकले विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिने किसिमका शिक्षा आर्जनको बाटो पहिल्याउन थालेका छन् । यही बाटो पहिल्याउँदै नेपालमा विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूकै पहलमा पनि व्यवस्थापनका विभिन्न विषयमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको पढाइ शुरू भएको छ । त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयले निर्माण गरेका व्यवस्थापनका कतिपय कोर्स र विदेशी उत्कृष्ट कलेजका कोर्सहरूबीच खासै तात्वक भिन्नता पाइँदैन । त्यस्तै, विदेशी विश्वविद्यालयकै सम्बन्धनमा नेपालमा व्यवस्थापन सङ्कायको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका कलेजहरूमा त झन् एउटै कोर्स पढाइ हुने गरेको छ ।
विद्यार्थीसँगै लगानीकर्ता पनि अकर्षित
नेपालको व्यवस्थापन शिक्षामा हालसम्म करीब रू. २० अर्ब लगानी भएको निजी कलेज सञ्चालकहरूको अनुमान छ । यद्यपि, यसबारेमा यकिन तथ्याङ्क उपलब्ध हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा भएको कुल लगानीमध्ये करीब २० प्रतिशत लगानी व्यवस्थापन पढाइ हुने कलेजहरूमा भएको फ्लोरिडा एजुकेशनल एकेडेमीका प्रिन्सिपल डा. मनोजकुमार झाले बताए । कलेज सञ्चालकहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षमा यस्तो लगानी तीव्र रूपमा बढिरहेको छ । उनीहरूको भनाइअनुसार व्यवस्थापन शिक्षाका लागि गत आर्थिक वर्ष (आव)मा मात्र देशभर रू. ८० करोडभन्दा बढी लगानी थपिएको छ ।
मुलुकमा औद्योगिक वातावरण खलबलिँदै गएकाले पनि शिक्षामा लगानी थप आकर्षित भइरहेको सम्बद्ध विज्ञहरूको बुझाइ छ । त्यसमध्ये पनि बहुसङ्ख्यक मध्यमवर्गीय विद्यार्थीको रोजाइ व्यवस्थापन सङ्कायमा विभिन्न विषय बनेपछि यस सङ्कायमा लगानी बढ्दै आएको हो । पछिल्लो समय यस क्षेत्रमा विदेशी लगानीसमेत आउन थालेको छ । अधिकांश कलेज सञ्चालकहरू भन्छन्, अहिलेको लगानी पर्याप्त छैन । अझै पनि धेरै त्यस्ता कलेजहरू छन्, जसले आवश्यक पूर्वाधारको बन्दोबस्त गर्न सकिरहेका छैनन् । यसलाई सुधार गरेर न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न पनि ठूलै लगानी आवश्यक पर्नेछ ।
शुल्कबारे मापदण्डको अभाव
सरकारले व्यवस्थापन सङ्कायका विषय पढाउने कलेजहरूका लागि मापदण्ड तोक्न सकेको छैन । यसले गर्दा कतिपय विद्यार्थीले महँगो शुल्कमा पनि गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छैनन् भने कतिपयले उचित तथा सस्तो शुल्कमै गुणस्तरीय शिक्षा पाइरहेको गुनासो विद्यार्थीहरूको छ । तर, मापदण्डकै अभावमा शुल्क र गुणस्तरबीच त्यति धेरै तात्क अन्तर नभएको निमित्त डिन शर्माको भनाइ छ ।
प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिको विकल्प छैन
नेपालमा विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धनमा पनि कलेजहरू सञ्चालित छन् । र, विदेशीकै प्रत्यक्ष लगानीमा कलेजहरू सञ्चालनको तयारी भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नेपालका व्यवस्थापन सङ्कायअन्तर्गतको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका कलेजका लागि शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको चुनौती देखिएको छ । यदि, आफ्नो प्रतिस्पर्धी क्षमता विस्तार गर्न नसके कलेजहरू धराशयी हुने अवस्था पनि सृजना हुन सक्छ । तर, विदेशी लगानीले त्रिविलाई कुनै फरक नपार्ने निमित्त डिन शर्माको भनाइ छ । ‘हामीले हाम्रो कोर्स र शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाइसकेका छौं,’ उनले भने । व्यवस्थापन विश्वव्यापी शिक्षा भएकाले यसैअनुसार अन्य कलेजहरूले पनि आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउनुपर्ने उनले बताए ।